Ciidamada Jabuuti Oo Lagu Weeraray Gobalka Hiiraan. – Calamada.com
Ciidamada Jabuuti Oo Lagu Weeraray Gobalka Hiiraan.
calamada February 5, 2017 1 min read
Wararka ka imaanaya gobalka Hiiraan ee bartamaha dalka Somaliya ayaa sheegaya in habeenkii xalay ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin weerar culus ku qaadeen difaacyada ciidamada dowlada Ridada Jabuuti ay ka sameysteen qeybo ka mid ah gobalkaasi.
Dagaalka waxey ciidamada Muslimiinta si gaar ah ugu qaadeen difaacyada ciidamada Jabuuti iyo kuwa dowlada federaalka ee degmada Jalalaqsi gaar ahaan saldhiga iyo fariisinka ay ka sameysteen Buundada degmadaasi.
Dagaalka waxaa la isku adeegsaday hubka culus iyo midka fudud kaasi oo si aad ah looga maqlayay degaano badan oo hoostaga degmada’iyadoona dagaalka uu socday muddo saacad ku dhaw.
Qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada Jalalaqsi ayaa sheegay in gabi ahaan saaka ciidamada Jabuuti ay diideen in laga soo agdhawaada saldhiga iyo Buundada taasi oo muujineysa iney jiraan khasaara dhimasho iyo dhaawac ah oo ciidamada Ridada Jabuuti iyo kuwa dowlada Ridada federaalka kasoo gaartay dagaalkaas.
Previous: Askar Ka Wada Tirsan Dowlada Federaalka Oo Diriray.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 08-05-1438 Hijri.